सामुहिक हत्या गरेका माखिमले विगत करीब दुई वर्षदेखि मानसिक रोगविरुद्धको औषधि सेवन गर्दै आएको खुलेको छ । प्रहरीले उनको घरबाट केही औषधि र औषधिका खोल फेला पारेको छ । उनी मानसिक रुपमा असन्तुलित भएकै कारण ...
प्रकाशित: २०७६-०२-१० ०८:३७:०३
पाँचथर- प्रहरीले पाँचथरको मिक्लाजुङ गाँउपालिका–३ आरुबोटेमा सोमबार राति भएको सामूहिक हत्याको घटनाका थप प्रमाण फेला पारेको छ । उक्त घटनाका मुख्य अभियुक्त ठहर्‍याइएका सोही गाँउपालिका-७ लुमाङ्दिनका मानबहादुर माखिमको परिवार तथा सामूहिक हत्या गरिएका अवस्थाका आधारमा थप प्रमाण फेला परेका हुन् ।
श्रीमती मनकुमारीसँग सम्बन्ध विच्छेद गर्न अस्वीकार गर्ने मानबहादुरको श्रीमतीसँग भने सधैँ झगडा हुने गरेको उनका आफन्तले प्रहरीलाई बताएका छन् ।
उनी बाहिर सोझो र समझदार देखिने तर रक्सी पिएपछि आक्रमणमा उत्रने स्वभाव रहेको स्थानीयलाई उद्धृत गर्दै प्रहरी निरीक्षक पौडेलले बताए । मानबहादुरले श्रीमतीसँग सम्बन्ध विच्छेद गर्न अस्वीकार गर्दै आए पनि उनकी श्रीमती मनकुमारी भने उनीसँग जसरी पनि सम्बन्ध विच्छेद गर्ने पक्षमा रहेको मनकुमारीका माइती पक्षको भनाइ छ ।
यस्तै प्रहरीले हत्या गरिएकाको शवको अवस्था, धारिलो हतियार प्रहारको प्रकारलगायत सुक्ष्म विश्लेषण गरेको छ । “सबैलाई एकै प्रकारले धारिलो हतियार प्रहार गरेको अनुसन्धानमा खुलेको छ”, प्रहरी निरीक्षक पौडेलले भने, “उनी एक्लैले सबैलाई धारिलो हतियार प्रहार गरेको देखिन्छ ।”
हालसम्मको अनुसन्धानमा उक्त घटना गराउन माखिमबाहेक अन्यको संलग्नता देखिने कुनै पनि प्रमाण फेला नपरेको प्रहरी निरीक्षक पौडेलले वताए । “सबै अनुसन्धान सम्पन्न भएपछि कुनै प्रमाण फेलापर्‍यो भने त्यो अलग कुरा हो तर हालसम्म उनी एक्लैले घटना गराएको देखिन्छ”, पौडेलले भने ।
प्रहरीले हत्याका मुख्य अभियुक्त ठानिएका माखिम तथा हत्या गरिएका बमबहादुर फियाक र धनराज शेर्माको परिवार, आफन्त, छरछिमेकीलगायतसँग सोधपुछ जारी राखेको छ । यस्तै यी सबैको फोनको विवरण सङ्कलन तथा विश्लेषणको कार्यसमेत जारी राखेको जनाएको छ ।
सामूहिक हत्याको घटनास्थल, माखिमले आत्महत्या गरेको स्थान, उनले केही सामग्री छोडेको स्थान, माखिमको घरलगायतका क्षेत्रमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको कमाण्डमा अनुसन्धान जारी रहेको पौडेलले जानकारी दिए ।
शवको दुई स्थानमा सामूहिक अन्त्येष्टी
सामूहिक हत्यामा मारिएकाको दुई स्थानमा आज सामूहिक अन्त्येष्टी गरिएको छ ।
बमबहादुरसहित चार जनाको आरुबोटकै चिहानडाँडामा तथा धनराज शेर्मासहित पाँच जनाको पुख्र्यौली गाँउ सराङ डाँडामा अन्त्येष्टी गरिएको हो । सामूहिक चिता बनाई शव जलाइएको स्थानीय गणेशप्रसाद लुइँटेलले जानकारी दिए । रासस
सुर्खेतमा ७५ जनामा परीक्षण गर्दा ५० जनामा कोरोना पुष्टि
ओलीले किन अन्त्य गरे संसद् अधिवेशन?
रोशनी हत्या प्रकरण : ‘माता’को उक्साहटमा भएको थियो घटना
१ सुर्खेतमा ७५ जनामा परीक्षण गर्दा ५० जनामा कोरोना पुष्टि
२ बिहेमा २५ जनाभन्दा बढी भेला हुन नपाइने, यी हुन् वैशाखभर बन्द हुने क्षेत्र
३ झन्डै अढाई घण्टा ढिला गरी कांग्रेस बैठक सुरु
४ ओलीले किन अन्त्य गरे संसद् अधिवेशन?
५ मनोमानी सञ्‍चालनमा रहेका तालिम केन्द्रहरु नियन्त्रण गर्दै शिक्षा मन्त्रालय